New Delta 8 THC CBD Affilate Bhalisa Ikhasi
Siyakwamukela ku-Red Emperor Collective Affiliate Welcome Page
I-First Virtual Online Line World Dispenary Ebanzi Ekhokha Amakhomishini Kubasebenzisi Bayo
Isinyathelo sakho sokuqala ukugcwalisa ifomu lokubhalisa, Uma ungenayo iwebhusayithi futhi uhlela ukukhuthaza imikhiqizo ngezokuxhumana bese ufaka iRedEmperorcbd.com lapho icela ukufaka i-URL yakho.
Akunandaba ukuthi uhlala kuphi emhlabeni ungaqala ukuthola imali manje ngokuthengisa okusemthethweni kwe-CBD neDelta 8 THC. Okwamanje, okuwukuphela kweZwe esithengisa kulo yi-United States neCanada, kepha njengoba amazwe amaningi ngokwengeziwe esemthethweni enjalo azolandela iMexico.
Izinkokhelo zenziwa nge-Bi-Weekly ku-akhawunti yakho ye-Paypal.
Kuthiwani uma ngihlala esifundazweni esivimbele i-delta 8 engingakwazi ukuhlanganyela kuyo? Yebo, ungavele ukhangise imikhiqizo yethu kubangani nakumalungu omndeni akwezinye izifundazwe.
Chofoza lapha ukuze ubhalise manje futhi ube yingxenye yomlando futhi uthole imali enkulu ngokukhuthaza imikhiqizo yethu ye-Delta 8 THC ne-THC. https://redemperorcbd.com/affiliate-area/
Zonke izinxusa kufanele ziqale zenze izixhumanisi zazo endaweni ephethwe ngemuva kokubhalisa ukuthumela isixhumanisi kuwebhusayithi yakho noma enkundleni yezokuxhumana chofoza kusixhumanisi bese u-oda okungenani umkhiqizo owodwa. Ngale ndlela ungabuyela endaweni ephethwe futhi ulandelele ukuthengisa kwakho ukuze uqiniseke ukuthi ufakiwe futhi wakhokhelwa kahle. Uma uhlala esifundazweni esivimbele i-Delta 8- THC bese u-oda umkhiqizo we-CBD onjenge-tincture, isilwane esifuywayo, i-sunblock lotion, noma eminye imikhiqizo engama-40 ye-CBD esinayo.
Uhlelo lwethu lwe-Affiliate Software lulandelela amakhasimende akho impilo yakho yonke. Wonke ama-oda akwenzela wona azoqhubeka nokuthola ikhomishini yengeniso ethile eyinsalela enhle
Izixhumanisi Zezisetshenziswa Ezihambisanayo:
Umhlahlandlela wokuqala wokuhambisana nokuphathwa kohlelo lwama-newbies - i-AffiliateWP
Izindlela ezi-4 zokusiza abaxhumana nabo ukuthi baqale ngokumaketha ibhizinisi lakho - i-AffiliateWP
Ulandelela kanjani futhi ulinganise uhlelo lwakho lokuhambisana - i-AffiliateWP